Isizukulwana sesi-5 esilandelayo se-Apple TV siya kulawulwa yi-A10X kwaye iya kuba ne-3 GB ye-RAM | Iindaba zeGajethi
Isizukulwana sesi-5 esilandelayo se-Apple TV siya kulawulwa yi-A10X kwaye iya kuba ne-3 GB ye-RAM
Ngomso yenye yezona zinto zilindelwe kakhulu kwi-Apple, hayi kuphela ngabalandeli benkampani, kodwa nangabachasi bayo abakhulu, kuba ekugqibeleni siza kubona i-iPhone X, i-iPhone apho iApple ibhiyozela iminyaka eli-10 yokusungulwa kwemodeli yokuqala. Kodwa siza kubona iApple Watch ngonxibelelwano lwe-LTE, nangona ekuqaleni ingavumeli ukufowuna. Kodwa siza kubona kwakhona ukuhlaziywa kwee-AirPods, ukuhlaziywa apho Indawo ekhokelwayo ebonisa inqanaba lokuhlawuliswa liguquliwe kunye neApple TV, ibhokisi esekwe phezulu yenkampani, eya kuthi ifikelele kuyo kwisizukulwana sesi-5.
Eyona nto intsha siyaziyo ngalo mzuzu kwaye iqinisekisiwe kwisizukulwana sesi-5 i-Apple TV isibonisa indlela esi sixhobo esiya kuhambelana ngayo nomxholo kwi-4k HDR, isithintelo esisifumana kwimodeli yesizukulwana esidlulileyo, imodeli esele Inxalenye yenqaku lokuba kude kube ngoku siyiqonda njani njenge-Apple TV, kuba abafana baseCupertino bakhupha inkqubo yokusebenza, I-tvOS, inkqubo yokusebenza ethathwe kwi-iOS kwaye apho sinokufaka khona nawuphi na umdlalo okhoyo kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad.
Kodwa ukuze ukwazi ukulawula lo mxholo, iprosesa yeApple TV nayo kufuneka ihlaziyiwe. Imodeli yesizukulwane sesi-4, ngoku ekwimarike, ilawulwa yi-A8 kunye ne-2 GB ye-RAM. Amarhe amatsha acebisa ukuba isizukulwana sesi-5 se-Apple TV siya kulawulwa yi-A10X, iprosesa efanayo esinokuyifumana ngoku kwi-Apple's Pro Pro, ukongeza kwi-3 GB ye-RAM.
Ukwanda kwenkumbulo kukhuthazwa yi i-bandwidth kunye ne-cache eyimfuneko ukuze ukwazi ukuvelisa kwakhona ngokuhambisa umxholo kwi-4k. Uhlaziyo lweprosesa lubonisa indlela iApple efuna ngayo iApple TV ukuba ibe liqonga lomdlalo wevidiyo, imidlalo yevidiyo leyo izakuvumela ukubonelela ngemizobo ye3DNjengakwimeko yeNintendo switch, kuba ngokuchanekileyo ayinakusondela kwintsebenzo kunye nomgangatho obonelelwa yiPlayStation 4 kunye neXbox One.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukusasaza » Isizukulwana sesi-5 esilandelayo se-Apple TV siya kulawulwa yi-A10X kwaye iya kuba ne-3 GB ye-RAM